शास्त्रका अनुसार विवाह गरिसकेपछि यी राशि हुनेहरूको चम्कन्छ भाग्य (हेर्नुहोस्) —
शास्त्रका अनुसार प्राय मानिसहरूको जीवन विवाह हुनुभन्दा पहिले र पछि धेरै फरक पर्दछ । कुनै मानिसहरू विवाह हुनु भन्दा पहिले खुसी र सुखी हुन्छन् भने कुनै मानिसहरू विवाह गरिसकेपछि दुखी र निराश हुने गर्दछन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्तो राशि जसको नाम को अगाडी को अक्षर ही, हू, हे, हो, डा, डू, डी, डे वा डो आउँछ भने तपाइको राशिफल कर्कट हो यी राशि हुनेहरूको विवाह गरिसकेपछि को जिन्दगी को भाग्य चम्कने ज्योतिष हरूको दामी समेत रहेको छ ।
त्यस्तै कर्कट राशी हुने मानिसहरु इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तब्यनिष्ठ पनि हुने ज्योतिष शास्त्रले दाबी गरेको छ ।कर्कट राशी हुनेहरुको जीवनमा विवाहको कुरा चल्दा आफ्ना आमाबाबुले हस्तक्षेप गर्छन् जुन कुरा उनीहरुलाई भने मन पर्दैन् । तर विवाह भएपछि निकै नै सुखी हुन्छन् । कर्कट राशीको मानिसको भाग्योदय विवाहपछि नै हुन्छ । विवाह पछि भाग्य र परिवर्तन यस राशीको मानिसको जीवनमा विवाहले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यो राशी हुनेहरुको भाग्य विवाहपछि खुल्नेछ । विवाह गरेपछि यीनीहरुले जुन काममा हात हालेपछि सफल हुनेछ । कर्कट राशी हुने मानिसहरुले आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गरिरहने बानी हुन्छ । यो राशीका मानिसहरुएकदमै परिश्रमी र इमान्दार हुन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस !यी ३ राशि हुने पुरुषलाई पाउनको लागि महिलाहरु पा’ग’ल सम्म हुन्छन हेर्नुहोस ति राशिहरु : शास्त्रका अनुसार केहि यस्ता रासिहरु जुन राशि भएका पुरुस हरु को प्रेम मा महिला हरु परिसकेपछि पुरुष लाई पाउन को लागी पागल सम्म हुन सक्छन ! कतिपय पुरुष हरु यति आकर्षक हुन्छन कि जसलाई पहिलो नजर मै महिलाहरु ले दिल को राजा बनाउन भ्याएका हुन्छन ! अर्थात प्रेम गर्न थाल्छन हामीलाई लाग्ने गर्छ कि बास्तव मा यस्तो किन हुन्छ र हरेक महिलाहरु यिनीहरुको प्रेम मा पर्दछन !
मिथुन राशि मिथुन राशि हुने पुरुषहरूको व्यक्तित्व निकै बलियो हुन्छ, जसको कारण उनीहरूले सजिलै महिलाहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्दछन् । यस राशिको पुरुषको विषयमा यो पनि देखिएको छ कि यिनीहरूको केवल एक इशाराले महिलाहरू घायल हुन्छन् । यी पुरुषहरू अरू भन्दा महिलाहरूको विश्वास जित्न माहिर हुन्छन् ।
सिंह राशि वस्तुशास्त्रमा देखिएको छ कि सिंह राशिको पुरुष अन्य पुरुषको तुलनामा बढी रोमान्टिक हुन्छन् । यिनीहरू देख्नमा निकै असल र भद्र हुन्छन्, जो कसैसँग पनि बढी बोल्न रुचाउँदैनन् र यिनीहरूको यहि स्वभावले महिलाहरूलाई प्रेममा पागल बनाउँछ ।
तुला राशि तुला राशि हुने पुरुषहरूको यदि व्यवहारको कुरा गर्दा अरू दोस्रो राशिको पुरुषको तुलनामा निकै रहस्यमय देखिन्छ । यस राशिका पुरुषहरूले बढी कोशिश नगर्दा पनि महिलाहरू यिनीहरू प्रति आकर्षित हुन्छन् । यति मात्र नभई महिलाहरू यी पुरुषसँग मित्रता बढाउन निकै उत्साहित हुन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ! कहिले सपनामा आफ्नो बिहे भएको देख्नु भएको छ ? यस्तो हुन्छ यसको फल जानिराखौ ..! मानिसको दैनिक जीवनमा दिन मा एक पटक सुत्ने पर्ने बाध्यता हुन्छ भगवान ले नै हामीलाई यस्तो फल दिएर पठाएका छन् ! सुत्दा दिउस होस् या राति हामि सबैले सपना देख्ने गर्छौ सपना मा अनेक कुरा हरु देखिन्छ हामीले सोच्दै नसोचेका कुराहरु हामीले सपना मा देख्न सक्छौ ! तर कहिले काही त यस्तो सपना पनि देखिन्छ आफ्नै बिहे भएको सपना देखिन्छ कुनै पनि सपना ले केहि नै केहि संकेत गरेको हुन्छ्ब ! यस्तो सपना देख्दा के हुन्छ हानि हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ भन्ने बारेमा बताएका छौ !
अष्ट्रेलियामा भिष’ण अगोलागी, २ राज्यमा ‘संकटकाल’को घोष’णा, सिड्नीसम्म पुग्यो आगो
भक्तपुरको सूर्य विनायकमा स्थापना भयो पाथीभरा मन्दिर ।
काठमाण्डौ / यो संसारका हरेक व्यक्ति एकजस्ता हुँदैनन् । कसैमा केही कुरा विशेष हुन्छ भने कसैमा...
यस्ता छन् महिलामा हुनुपर्ने ३२ लक्षण ‘गुणहरू’ । तपाइमा के-के छन् ?
काठमाण्डौ । हिन्दु धार्मिक परम्परा अनुसार विवाहका बेला बर-बधुको चिना मिलाउँदा महिलामा हुने लक्षणलाई विशेष ध्यान...